Mushandisi haana basa uye izvo zvinofanirwa kuchinja (Maonero) | Linux Addicts
Kumirira kusvika kwegore reLinux pane desktop, uye ini ndinozvibvumira kuba mutsara kubva kuChesterton, chimwe chinhu chinoda kushivirira kupfuura basa rekubata hove. Kune vazhinji vedu, zvinopfuura chinangwa chinhu chinosekesa, kunyangwe paine vamwe vatendi vechokwadi vasingarasi tariro.
Chokwadi ndechokuti neimwe nzira kurukurirano yacho yakava isina musoro. Nekunonoka kushoma kunokonzerwa nedenda, kudzikira kwemakomputa edesktop kunoita sekusingamisikike. Yepamusoro-simba nhare uye Chromebook-mhando zvishandiso zvinofanirwa kunge zviri midziyo yakawanda mumakore anotevera. Uye, mune vese vakundi vakatsanangurwa kwenguva yakareba
Linux inosara nenyaradzo yekutonga mumasevhisi emakore uye macomputer makuru.
Asi, gakava richiri kunakidza pane imwe pfungwa. Kunzwisisa zvatisina kuita (uye zvakaitwa neApple neGoogle) zvinotitendera kuti tive takagadzirira shanduko inotevera yeparadigm.
1 Nderipi raizova gore reLinux pane desktop?
2 Mushandisi haana basa nazvo.
2.1 Chii chatiri kupa mushandisi wemba?
3 Mhinduro yacho.
Nderipi raizova gore reLinux pane desktop?
Kutungamirira nhaurirano, ngatibvumiranei kuti mhinduro inotarisirwa ingavei.
Tinogona kuzvitsanangura nenzira mbiri; Kubva pane tekinoroji yekukura kwemaonero, ingave nguva iyo paine kugoverwa kweLinux kunokwanisa kuisirwa neavhareji mushandisi uye kuvabvumira kuti vaite zvakafanana sezvavanoita neWindows kana macOS.
Nzira yechipiri mugove wemusika.
Chipingamupinyi chikuru chevatsigiri venzvimbo yekutanga ndiyo mitambo. TO Kunyangwe iyo iyo nhamba yemazita iri kuramba ichiwedzera uye kune matekinoroji anobvumira kumhanya Windows mitambo, mhedzisiro yenguva yacho iri pakati nepakati.
Mushandisi haana basa nazvo.
Imwe nguva yapfuura mumwe munhu akaita dambudziko kugadzira vhidhiyo achipindura chimwe chezvinyorwa zvangu. Nharo yake yaive iyoyo Linux haifanire kunetseka nezvekuva nevashandisi vakawanda. Kana vasingade kuzvigamuchira sezvazviri, ramba uchishandisa Windows kana macOS.
Tiri kuona kukanganisa mukupokana kwake mazuva ano. Vakapiswa vanogadzira, mapurojekiti ane matambudziko akakomba ekuchengetedza, uye makambani ari kuita mari kubva pabasa revamwe. Zvese izvi mhedzisiro yedambudziko rimwe chete. Iyo yemahara uye yakavhurika sosi software nharaunda haina basa nemushandisi wekupedzisiral. Nekuda kweizvozvo, mushandisi wekupedzisira haafarire software yemahara.
Nhamba yevashandisi = mari = vagadziri vakazvipira nguva yakazara kugadzira yemahara software.
Mumwe wake José Miguel anobva kuTecno y Soft blog tangazve zvakajeka dambudziko:
Mushandisi anowanzo tsvagei?
Inozivikanwa uye iri nyore kushandisa sisitimu yekushandisa, inowanikwa pamusika uye ine zita rayo: Windows. Ndizvo zvarinotengesa, tichifunga kuti nekuti isoftware yemahara uye kuremekedza kodzero dzemushandisi chingave chinhu chakakosha, kwave kukanganisa. Nezvese izvi, handisi kutaura kuti nyaya dzakadai seyemahara software, kuremekedza kodzero dzevashandisi kana kusimudzira hazvina kukosha, asi hazvina kudaro, uye hazvina kukwana kuti zvikonzere kudhonzwa kune yedu yatinoda desktop. Iko shanduko haina kuitika, kupfuura chero chinhu, nekuti kunyangwe zvese izvi haisi nyaya yekuziva. Iko kushaikwa chaiko kwekuda shanduko kwakonzera uye kuri kukonzera kumira kweLinux desktop.
Chii chatiri kupa mushandisi wemba?
Iyo hombe (uye kazhinji isingaenderane) inopa yekugovera imwe neimwe ine yavo seti yemaraibhurari akaiswa kare uye vatyairi uye software.. Pane mukana unonzwisisika wekuti chirongwa chakavakirwa Windows 8 ichashanda Windows 11, uye zvakapesana kuti chirongwa chinoshanda paUbuntu chichaita zvimwe chete pane vhezheni yeFedora yakaburitswa mwedzi unotevera. Kunyangwe mushanduro imwechete yekugovera kwakafanana, asi nedesktop yakasiyana, matambudziko anogona kuitika.
Sezvo chikamu chemusika chiri chidiki, hapana kurudziro kune vanogadzira vakazvimiririra kana makambani kuti aende kune dambudziko rekutumira maapplication avo. Sezvo pasina huwandu hwakawanda hwekushandisa, nhamba yevashandisi haina kuwedzera.
Mhinduro iri mukusikwa kwechinhu chitsva (Iyo Linux Foundation yakanyanyisa kufurirwa nemakambani mamwechete anofarira kuchengeta zvese sezvazviri uye iyo Yemahara Software Foundation inobatanidzwa zvakanyanya mune ideological maficha emahara software). Ichi chitsva chinofanirwa kuvavarira kuwedzera yemahara uye yakavhurika sosi software musika kutanga nekugoverwa kweLinux. Nezveizvi, inofanirwa kuferefeta musika, uye kutsigira kugadzirwa kwezvinhu zvitsva zvinopindura mhedzisiro yetsvagiridzo iyoyo uye zvinogona kuzvipa mari mune ramangwana.
Izvi zvinoreva kurega egos uye kushandura kutarisa kubva kune vanogadzira uye hunyanzvi hwavo hwekuronga vari pamusoro pepiramidhi kuenda kune imwe iyo kugadzirisa matambudziko uye zvishuwo zvemushandisi zvinouya pekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mushandisi haana basa uye izvo zvinofanirwa kuchinja (Maonero)
Kana isu tikatarisa kusimudzira zvakanyanya pane izvo vashandisi vanoda, isu tinozopedzisira tafanana muWindows, uko zvisinei nekuti yakakosha sei chikamu kubva kune inoshanda kana chengetedzo nzvimbo yekuona, kana isingashande kutengesa chigadzirwa saka haina kugadzirwa. .
Semuenzaniso, ndanga ndichishandisa Linux kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu uye chimwe chezvikonzero chikuru chandinoshandisa imhaka yekuti zvinhu zvinofamba nedanho ravanoda kuti riitwe nemazvo, kuchengetedzwa, scalable uye chengetedzo.
Parizvino zvinotariswa zvakaiswa pamushandisi kupfuura zviri kuitika izvozvi, chaunowana mukuita ndechekuti mushandisi (kazhinji asina ruzivo rweiyo ins uye kunze) anosarudza tarisiro yebudiriro. Uye iwe unofanirwa kuyeuka kuti kune avhareji mushandisi, kusanganisira Linux, kune miriyoni zvinhu zvisina kukosha kwaari nekuti haazvione, asi izvo zvakanyanya kukosha pakushanda kweLinux pane zvinhu izvo. mushandisi anoona (chaizvo desktop uye GUI application).
Uyezve, dai makore apfuura pfungwa yanga iri pane izvo mushandisi anoda, nhasi Linux yaisazove zvayave.
Mazuva ano Linux inoshandiswa kune zvese, CERN, internet, NASA, mauto, kudzora kwendege, Kumhanyisa kutengesa, satellite, rovers, epamusoro mazana mashanu epamusoro komputa, nezvimwe kunze kwemafoni, marouters, wachi, smart TV, mota, nezvimwe.
Dai sarudzo yakaitwa nenguva yekupa kutarisisa kune izvo vashandisi vanoda, nhasi isu tingadai tisina chimwe cheizvozvo uye panzvimbo pacho tinenge tichirwa neWindows kumusika wemushandisi wedesktop.
Ini ndinofunga zvirinani kune wese kuti Linux igare yakanaka pane zvayakanakira. Uye hapana dambudziko rekuti vazhinji vevashandisi vedesktop vanoramba vachishandisa Windows. Muzvivi vanotakura kutendeuka.
Kufunga mushandisi hakusi kumubvunza zvaanoda, asi kumuratidza kuti uri kumupa zvaanoda.
2025 gore reGNU/Linux padesktop nekuda kwekubatana kwakakosha kweSatya Nadella. Ndinonamata kuti asarohwa mbongoro yake isati yasvika, zvinova zvakamukodzera.
German klenner akadaro
Zvingave zvakanaka kuwana standardization sezvo izvo zvaizoenda kure.
Kupfuura izvo zvaunonongedza, izvo zvinoita sekunge zvinonyatsoenderana kwandiri, zvinoratidzika kwandiri kuti uri kufuratira kuzvipira kwehurumende mukusimudzira, tsigiro uye kusimudzira software yemahara.
Kuratidza bhatani, munyika yangu vadzidzi vanopiwa komputa kuti ivabatsire kuita basa ravo rechikoro. Nekudaro, hazviuye, sezvingatarisirwa nemunhu, neGnu Linux, asi neWindows. Izvo zvakakosha, kana tichida kuti zvinhu zvitange kushanduka, kuti vadzidzi vajairane neGnu Linux kubva vachiri vadiki. Ndakave nenguva yakaoma kuwana komputa mukamuri rekombuta kuti ndiise Zorin Os, zvekuti vadzidzi vakaziva kuti kune hupenyu kupfuura Windows.
Tichifunga nezvezviitiko zvinoitwa nevazhinji vevadzidzi, mamwe mapurogiramu eWindows aripo muGnu Linux akawandisa.
Pindura kuGerman Klenner
PROSPEROUS ANTONIO PEREZ PEREZ akadaro
Hazvigoneki zvakatsanangurwa nani, ZVESE ZVAWATAURA ICHOKWADI. Ndinozviona semushandisi wekupedzisira. makore akawanda ndichishandisa microsoft (windows 95) kusvika mumahwindo 10 ndinoneta nekubhadhara mwedzi mitanhatu kana misere yega yega. saka ndakachinjira kulinux ubuntu 16.04, uye ndakafunga kuti zvaive zvakanaka kukwanisa kuisa zvandaida uye kugadzirisa zvese. Ndakafarira zvese zvemahara uye zviri nyore, nhasi ndiri mu kde neon 25th anniversary. asi zvakadini nemitambo ... uye vatongi. Ndinokukorokotedzai, ndinovimba handife ndisina kuona linux inokunda mhepo maererano nevashandisi vekupedzisira.
Pindura kuna PROSPERO ANTONIO PEREZ PEREZ